Yurub waxay isu rogtay Hub kookayn ah Sababo la xiriira balaadhinta suuqa bilyan ee doollarka ah • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Dambi Yurub waxay isu beddeshaa xudunta cocaine-ka iyadoo ballaarinaysa suuq balaayiin doollar ah
albaabka Ties Inc. 13 May 2022
maqaal by Ties Inc. 13 May 2022
Yurub ayaa si isa soo taraysa u noqonaysa xudunta soo saarista kookeynta iyo u wareejinta gobolada kale ee aduunka, marka laga soo tago inay tahay suuqa ugu weyn ee macaamiisha, wakaaladaha EU ayaa sheegay todobaadkii hore. Waxay sidoo kale ka digeen warshadaha methamphetamine ee sii kordhaya.
Xashiishad ka dib, kookeynta waa daroogada ugu badan ee laga isticmaalo Yurub, oo leh malaayiin isticmaale ah iyo dakhli dhan 10,5 bilyan oo Yuuro ($ 11,1 bilyan) sanadka 2020, sida lagu sheegay warbixin wadajir ah oo Midowga Yurub ay soo saartay hay'adda fulinta sharciga ee Europol iyo wakaaladda daroogada EMCDDA.
1 Suuqa kookeynta ee Yurub ayaa sii kordhaya
2 Qaadista daroogada iyo methamphetamine ee Yurub
Suuqa kookeynta ee Yurub ayaa sii kordhaya
Suuqa Yurub ayaa sii koraya, oo ay hogaaminayaan wax soo saarka sare ee Koonfurta Ameerika iyo sidoo kale iyada oo la ballaarinayo suurtagalnimada in lagu farsameeyo daawada cayriin ee Yurub lafteeda. Waxaa laga yaabaa inay xitaa sii korodho iyadoo la horumarinayo noocyo cusub oo ah alaabada kookeynta ee qiiqa, ayay tiri warbixintu, iyadoo ka digaysa khataro caafimaad oo sarreeya. "Hadda waxaa sidoo kale jira wax soo saar badan oo ka dhacaya Yurub dhexdeeda, taas oo muujinaysa isbeddelka doorka gobolka ee ganacsiga caalamiga ah ee kookeynta," ayaa lagu yiri warbixinta.
Marka loo eego xogta ay ururiyeen wakaaladaha EU, Belgium waxay u muuqataa inay tahay xarunta warshadaha Yurub. Waa dalka Midowga Yurub ee qabtay cocaine-ta ugu badan sanadka 2020. Sannadkii u dambeeyay oo xog sax ah la hayo. Tani waxay khusaysaa ilaa 70 tan, gaar ahaan dekedda Antwerp, oo ka dhan ah 49 tan oo Nederlaan ah, oo ah waddanka labaad ee ugu weyn Yurub ee suuxdinta.
Belgium sidoo kale waa waddan hormuud ka ah samaynta kookaha, oo ay weheliyaan Netherlands iyo Spain, sida lagu sheegay warbixinta, taas oo caddaynaysa qabashada tiro badan oo horudhac ah oo kiimiko ah soo saarista kookeynta iyo macluumaadka ku saabsan xarumaha wax lagu sameeyo.
Qaadista daroogada iyo methamphetamine ee Yurub
Kokaynka laga keeno Yurub ee laga keeno Koonfurta Ameerika ayaa si isa soo taraysa dib loogu dhoofin doonaa qaybaha kale ee adduunka, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Aasiya, taasoo Yurub ka dhigaysa "meel weyn oo laga soo raro dawooyinka meelo kale ka imanaya," ayaa lagu yidhi warbixinta.
Suuqa Yurub ee methamphetamine sidoo kale wuu sii kordhayaa, laakiin weli aad ayuu uga yar yahay kan kookeynta. Waxaa intaa dheer, way adag tahay in la qiyaaso cabbirkeeda saxda ah. Kiciyeyaasha synthetic waxaa inta badan laga soo saaraa Jamhuuriyadda Czech waxaana lagu cunaa Bariga Yurub. Xog cusub oo la helay ayaa sheegeysa in dalabka uu sii kordhayo Galbeedka Yurub, gaar ahaan dalka Belgium oo noqday dalka ugu weyn ee soo saara dawada.
"Hadda waxaa jira walaac sii kordhaya oo ku saabsan xarumaha wax soo saarka ee Belgium iyo Netherlands, halkaas oo methamphetamine laga soo saari karo si aad u weyn," ayaa lagu yiri warbixinta. Yurub waa hormuudka soo saaraha methamphetamine adduunka oo dhan iyo soo saarayaasha Yurub ayaa hadda si isa soo taraya ula kaashanaya Mexico kooxaha dambiilayaasha ah si loo hagaajiyo hababka wax soo saarka, wakaaladaha EU ayaa ka digay.
Belgiumcocainedembimacmal ahdaroogadaburcad daroogadaEuropamethamphetamineNederlandSpain